च’मकदार छालाको लागि आफ्नो डा’इटमा गर्नुहोस् यी चीजको से’वन ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारच’मकदार छालाको लागि आफ्नो डा’इटमा गर्नुहोस् यी चीजको से’वन !
च’मकदार छालाको लागि आफ्नो डा’इटमा गर्नुहोस् यी चीजको से’वन !
एजेन्सी , च’मकदार र ज’वान छालाको सबै महिलाको चा’हना हुन्छ । बे’दाग र सफा अनुहारको लागि केटी पा’र्लर गएर फे’सियल गर्छन् र केही महिला घरमा आफ्नो छालाको हे’रचाह लागि क्लि’न्जिङ गर्छन्। फे’सियल गरेपछि अनुहारमा छुट्टै च’मक आउँछ। यस्तैमा तपाईले आफ्नो छाला बाहिरी मात्र सफा नगरी भित्री तरिकाले पनि हे’रचाह गर्नुपर्छ। च’मकदार र बे’दाग छालाको लागि हे’ल्दी डा’इट लिन नि’कै ज’रुरी रहेको छ। च’मकदार छालाको लागि आफ्नो डा’इटमा हरियो सागपात र फलफुलको से’वन गर्नुपर्छ।
थाहा पाउनुहोस् ताजा र च’मक छालाको लागी आफ्नो डा’इटमा के राख्नुपर्छ । च’मकदार र ज’वान छालाको लागि आफ्नो डा’इटमा मेवालाई राख्नुहोला । मेवाले छालालाई च’मकदार र जवान बनाउन म’दत्त गर्छ । च’मकदार छा’लाको लागि मे’वालाई आफ्नो अनुहारमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ । च’मकदार र बे’दाग छालाको लागि पानी नि’कै ज’रुरी रहेको छ। यदि तपाई अनुहारको ड’न्डीफोरबाट स’मस्यामा हुनुहुन्छ भने पानीको से’वन गर्नुहोला । पानी पिउनाले छा’ला हा’इड्रेट रहन्छ जुनले छाला च’मकदार र ज’वान रहन्छ ।
छालाको हेरचाहको लागी आफ्नो डा’इटमा फलफुल राख्नुहोला । फलको से’वन गर्नाले छाला ज’वान र च’मकदार रहन्छ । च’मकदार र ज’वान छालाको लागी ह’रियो सागपात निकै फा’ईदादायक रहेको छ । हरियो सागपात से’वन गर्नाले तपाईले आफ्नो अ’नुहारको दा’ग कम गर्न सक्नुहुन्छ । च’मकदार र बे’दाग छालाको लागि हरियो सा’ग्पात्को प्रयोग गर्नुहोला।